Home Wararka Xildh. Galmudug oo wacad ku maray inay u codeeyn doonaan malxiisayaasha Senatoriska...
Xildh. Galmudug oo wacad ku maray inay u codeeyn doonaan malxiisayaasha Senatoriska hadii aan la siin….
Xildhibaanada Galmudug oo ah xildhibaano madax banaan, oo aan ka talo qaadan Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa la sheegayaa in ay aad uga soo horjeedaan kuraasta loo xiraayo shaqsiyaadka gaarka ah. Sababta ay uga soo horjeedaan qorshahaas ma aha mid la xiriirta cadaalad iyo in ay dhacdo doorasho xalaal ah balse waa mid salka ku haysta dhaqaale.
Xildhibanada Galmudug ayaa in mudo ah sugaayay qabashada doorashada Aqalka Sare si ay dhaqaale uga sameeyaan doorashada. Xildhibaankiiba waxa uu ku xisaabtamaayay in ay ka heli doonaan doorashada lacag lagu qiyaasay $12,000 oo doolar iyo in ka badan.
Hadaba qorshaha uu damacsan yahay Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa gabi ahaanba meesha ka saarayso in ay xildhibaanada helaan wax lacag ah. Tusaale hadii uusan jirin tartan dhex-mara musharaxiinta waa ay adkaanaysaa in lacag lagu bixyo bixinta codadkooda.
“Labo sano ka badan ayaan sugaynay in aan lacag ka sameeyo doorashada Aqalka Sare, ma jirto cid aan ka yeelayno lacag ma helaysaan, hadii uusan Qoor Qoor iyo xulafadiisa na siin lacag gaaraysa $10,000 xildhibaankiiba waa la arki doonaa waxa ka dhaca hoolka Doorashada” sidaad waxa yiri mid kamida xildhibanada Galmudug oo ka gaabsaday in aan magaciisa faafino.
Waxa uu intaas ku daray “ Hadii aan lacagta baaqanaysa uusan isaga bixin, waxaan u codeyn doonaa malxiisayaasha, si loo wada qasaaro, laakiin anaga Qoor Qoor nama isticmaali karo si uu noogu gaaro danihiisa gaarka ah”.
Qoor-Qoor waxaa hortaalo labo daran mid dooro, ogoloow in lagu tartamo kuraasta ama xildhibaanada Galmudug u doyaari in aad mid kastaa siiso lacag uu ku qanco si loo meelmariyo Senatoriska uu rabo in uu soo saaro.